အောက်တိုဘာလ 2015 |3၏စာမျက်နှာ 19 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » အောက်တိုဘာလ (စာမျက်နှာ 3)
FEMA Lab ကြိုတင်သတိပေးမှုနှင့် RESPONSE ကွန်ယက်အပြီးအပိုင်စမ်းသပ်ရန်အစီအစဉ်စတင်ခဲ့သော
ဘဝ-Saving နည်းပညာ Next ကို-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ATSC 3.0 အသံလွှင့်တီဗီနျ Standard အမေရိကန်ဖက်ဒရယ်အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲရေးအေဂျင်စီရဲ့ပေါင်းစည်းပြည်သူ့အချက်ပေးနှင့်သတိပေးခြင်း System ကိုထည့်သွင်းလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည် (IPAWS) Lab မှယခု AWARN ၏နည်းပညာသရုပ်ပြမှအိမ်ရှင်ကစားနေသည် - ထိုအဆင့်မြင့်သတိပေးချက်များနှင့်တုံ့ပြန်မှုကွန်ယက်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ဦးဆောင်သည့်နည်းပညာကုမ္ပဏီများနှင့်ထုတ်လွှင့်ကထောက်ခံ, AWARN မျိုးဆက်သစ်အရေးပေါ်ထုတ်လွှင့်ဖို့လာမယ့်မျိုးဆက်ထုတ်လွှင့်နည်းပညာကိုထည့်သွင်းလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည် ...
ATTO နည်းပညာ SMPTE 8 မှာ 2015K တီထွင် Highlight မှ
ATTO နည်းပညာ, Inc, 25 နှစ်အတွင်းအဘို့အ high-performance ကိုအသံနှင့်ဗီဒီယို Workflows powering အတွက်အသိအမှတ်ပြုခေါင်းဆောင်, သူတို့က Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ယခုနှစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာမီဒီယာပညာရှင်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့် လိုက်. က၎င်း၏က high-performance ကိုဖြေရှင်းနည်းများကိုမီးမောင်းထိုးပြမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ် 26th - အောက်တိုဘာ 29th ကနေဟောလိဝုဒ်, CA. အတွက် (SMPTE®) နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံနှင့်ပြပွဲ။ အဆိုပါ SMPTE 2015 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံ & ...
ဒါရိုက်တာရက်ချိန်းဘုတ်အဖွဲ့ - ပြန်လည်ရောက်ရှိကြသည်အဖွဲ့ဝင်များ networks အသံ Sessions အတွက်ကျယ်ပြန့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်
မီဒီယာကွန်ယက်အဖွဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ (ကြသည်) ၏အဖွဲ့ဝင်များ - AES67 ၏အသိအမြင်နှင့်လွှာမှမြှင့်တင်ရန်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ် AV စနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းမဟာမိတ်ယာကုပ် Javits စင်တာ, နယူးယောက်မှာကျင်းပယခုနှစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ AES ကွန်ဗင်းရှင်းမှာကွန်ယက်အသံ Sessions အတွက်ထင်ရှားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကစားပါလိမ့်မည်, အောက်တိုဘာ 344th ကနေနိုဝင်ဘာ 29st မှ Booth #1 ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဦးဆောင်ထောက်ခံတဲ့အသံထုတ်လုပ်သူ Solid State Logic ရှိပါတယ် ...
Amagi CCW 2015 ပြသခဲ့သည်ကို Preview
Amagi - CCW 1227, Amagi မှာ Booth 2015 သူတို့ Non-တဆက်တည်းပထဝီဝင်နယ်မြေများအတွက်ပလေးအောက်, အကြောင်းအရာဒေသနှင့်တစ်ဦး multiscreen ပတ်ဝန်းကျင်တွင်တိကျတဲ့စျေးကွက်များအတွက်ငွေရစေခြင်းအပါအဝင်တီဗီကွန်ရက်များအသစ်ဖြစ်နိုင်ခြေဖန်တီးပုံကိုဖေါ်ပြခြင်း, အသက်ရှင်ခြင်းကို၎င်း၏ဟိုက်တီဗီပလက်ဖောင်းဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ Amagi ရဲ့ဟိုက်ပါတီဗီပလက်ဖောင်းတီဗီကွန်ရက်များတစ်ဦးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, CAPEX နှင့် OPEX လျှော့ချကြောင့်လာမယ့်မျိုးဆက်အပေါ်မှာမိုဃ်းတိမ်နည်းပညာများအပေါ်အခြေခံထားပါသည် ...
Entel ဘိုလီးဗီးယားသဟဇာတ မှစ. မြင့်စွမ်းရည် Bandwidth ဖြေရှင်းချက်နဲ့အတူတိုက်ရိုက်-အသံလွှင့်ဂြိုဟ်တုဝန်ဆောင်မှုဖြန့်ချထား
San Jose, ကာလီဖိုးနီးယား - အောက်တိုဘာ 28, 2015 - သဟဇာတ (NASDAQ: HLIT) ။ , ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေအခြေခံအဆောက်အအုံအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်, ယနေ့ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ Entel ဘိုလီးဗီးယား (၎င်း၏တိုက်ရိုက်-ထုတ်လွှင့်ဂြိုဟ်တုပါဝါမှသဟဇာတတစ်ဦးထံမှဘက်ပေါင်းစုံ headend ဖြေရှင်းချက်ချထားသည်ဟုကြေညာခဲ့သည် DBS) ဝန်ဆောင်မှု။ သဟဇာတရဲ့ High-density ကို, အရွယ်မှာကဗီဒီယိုအခြေခံအဆောက်အဦများဖြေရှင်းချက်အသုံးပြုခြင်း, Entel ဘိုလီးဗီးယားယခု 124 SD က MPEG-4 AVC, 20 HD ကို MPEG-4 AVC, ကယ်မနှုတ်နိုင် ...
အသံလွှင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက် Visual QC Tools များတွင် Switch 2.0 သတ်မှတ်ချက်အသစ်
Switch 2.0 အသစ်က Timeline ကိုအင်္ဂါရပ်များနှင့် VANC ကြည့်ရှုနိုင်သောပေါင်းစပ်ပြီးပိုမိုနက်ရှိုင်း QC ၏အစိတ်အပိုင်း workflows အဖြစ် Telestream, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကို tools များနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးယနေ့ Switch သည်၎င်း၏ Cross-platform မီဒီယာပလေယာနှင့်စစ်ဆေးရေး tool ကို၏အဓိကဗားရှင်းအသစ်ကိုများလွှတ်ပေးရန်ကြေညာခဲ့သည်။ ဗားရှင်း 2.0 ထိရောက်သောနှင့်အမြင်အာရုံတတ်နိုင်ပေး၎င်း၏နောင်တော်များ၏အောင်မြင်မှုအပေါ်တည်ဆောက် Switch ...
3 ၏စာမျက်နှာ 19«12345 » 10...နောက်ဆုံး»